पाल्पामा बेमौसमी आलु खेती शुरुवात - Jagaran Post
पाल्पामा बेमौसमी आलु खेती शुरुवात
जागरण पोस्ट ५ श्रावण २०७८, मंगलवार १३:०८
पाल्पा : पाल्पामा बेमौसमी आलुखेती शुरुवात गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको आलु मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका उपयुक्त स्थानमा आलु लगाउन थालिएको हो । न्यूनतम २० रोपनी क्लस्टरमा सहयोग गर्ने प्रावधानअनुरुप समुन्द्री सतहदेखि एक हजार ४०० देखि दुई हजार मिटर उचाइमा उत्पादन हुने बेमौसमी आलुका निम्ति क्षेत्र छनोट गरी सहयोग गरेको केन्द्रको प्रमुख शिव अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हिउँदमा उमे्रको आलुको टुसालाई उपचार विधिमार्फत तयार पारिएको बीउ नै वर्षातका समयमा रोपिने गरिन्छ ।
निस्दीमा मित्याल सामुदायिक विकास कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा खेती थालिएको हो । स्थानीय ३० कृषकले ३० रोपनी जग्गामा एक हजार ६०० केजी आलुको बीउ रोपेको संस्थाका व्यवस्थापक हेमबहादुर खाम्चाले बताए । उनका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको रु. एक लाख तथा सहकारी संस्थाको रु एक लाख गरी रु. दुई लाखको लगानीमा खेती शुरु गरिएको हो । वडा नं ४ लाई आलु पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बेमौसमी आलु खेती गर्न थालिएको कृषकहरु बताउँछन् ।
मित्यालको झ्याल्टुङ्, रुप्सेभन्ज्याङ, काफल, भोर्मा र खोप्लाक क्षेत्रमा कृषकले आलु खेती गरेको निस्दी कृषि शाखा संयोजक खिमराज कोइरालाको भनाइ छ । ज्ञान केन्द्रले वर्षायाममा आलु खेतीका लागि उपर्युक्त स्थान छनोट गरी निस्दीमा आलु लगाउन सुझाव दिए पनि कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणका निम्ति भएको निषेधाज्ञाले बीउ खरीद गरेर गाउँसम्म ल्याउन निकै समस्या भएको संस्थाले जनाएको छ । डडेल्धुरादेखि कार्डिनल जातको रातो आलु खरीद गरेर निकै कष्टसँग ल्याएर रोप्दा समयमै आलु लगाउन नपाएको व्यवस्थापक खाम्चाले बताए । उनका अनुसार जेठ महिनामै लगाउने आलु असारमा मात्रै रोपे पनि राम्रोसँग उम्रिएको र राम्रै उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकामा पनि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक सहयोग तथा कौडेलेक व्यावसायिक कृषक समूहको व्यवस्थापनमा करीब ४० रोपनी जग्गामा ४० क्विन्टल आलु रोपिएको सो केन्द्रले जनाएको छ । माथागढी गाउँपालिकाको ओलेसमा रोपिएको वर्षे आलुबाट राम्रो उत्पादन भएको समूहका अध्यक्ष अर्केश्वर सारुले बताए । माथागढीमा भने चैतमा नै आलु लगाए पनि समयमा पानी नपरेर समस्या भएको कृषकले जनाएका छन् ।
उनले भने, “समयमा पानी नपरेर समस्या भयो, उत्पादन भने तेब्बर लिन सफल भइयो ।” माथागढीमा करीब ३२ कृषकले बेमौसमी आलु खेती गरेका छन् । जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा भने सङ्घीय सरकार तथा कृषि शाखाको सहयोगमा आलु पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । कृषि शाखाप्रमुख सुनिता पोखरेलले गाउँपालिकाको चार स्थानमा गहुँ तथा आलु पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजनाअनुरुप पालिकाको वडा नं ४ मेहलढाँपमा बेमौसमी आलु खेती गरिएको जानकारी दिए ।
पालिकाको वडा नं ४ भुवनपोखरी र ७ को बल्डेङगढीमा गहुँ, ८ सत्यवतीमा हिउँदेआलु तथा ४ मा बर्खेआलु गरिएको हो । गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई सहयोग गरिएको करीब ६५ क्विन्टल आलु कृषकले लगाएका छन् । स्थानीय आलु पकेट कृषक समूहले करीब ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बेमौसमी आलु खेती गरेको छ । वर्षातको समयमा पनि चिलाउनी, तीतेपाती, असुरोको छापो तथा प्लाष्टिक मल्चिङको प्रयोगबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिने विभिन्न कृषि शाखाले जनाएको छ ।
बाघको संरक्षणसँगै राष्ट्रको जैविक विविधता र पर्यटन प्रवद्र्धनमा
इकोटोरियल गुयानामा बिष्णुहरि सेढाई अध्यक्ष निर्बाचित
भारततर्फ तस्करी हुँदै गरेको ३१ हजारकेजी हरियो केराउ
पछिल्लो समय नेपालमा घट्दै फोरजीका प्रयोगकर्ता
जग्गा अधिकरण गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री